MP oo soo jeediyay fikirro lagu jilcineyo sharciga deggenaanshaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isabella Lövin, wasiirka kaalmada caalamiga iyo Gustav Fridolin, wasiirka tacliinta. sawir: Henrik Montgomery/TT
MP oo soo jeediyay fikirro lagu jilcineyo sharciga deggenaanshaha
In la furfuro oo la sahlo xeerka soo-galootiga
La cusbooneeyay tisdag 25 april 2017 kl 10.22
La daabacay tisdag 25 april 2017 kl 09.29
Xisbiga (MP) ayaa doonaya in la sii yo sharci deggenaansho oo joogto ah magan-gelyo-doonka ku jira wax-barashada iyo kuwooda ku howl-gala shaqooyinka dhaqalaha lagu kabo. Sida ku cad xog ay laanta wararka ekot ka war-heshay.
Kuleeylihii sannadkii ina dhaafay 2016 ayuu baarlamanku gaaray go’aanno lagu adkeeyey siyaasadda soo-galootiga oo socon lahaa illaa iyo sannadka 2019. Xeerarkaasi oo macnahoodu ahaa in guud ahaan dadyowga ogolaanshaha deggenaansho lagu siiyo dalku ey helaan sharci deggenaansho oo ku meel-gaar ah.
Hase yeshee la siin karo oo keliya sharci deggenaansho oo joogto ah ciddii masruufkeeda ku filan, waa haddii aannu shakhsigu u baahnayn magan-gelyo buuxda oo dhab ah - qaxooti dhab ah.
Dhowaantan ayaa dib u habeeyn lagu sameeyey xeerkaasi iyo in dhallaanka keli-nimada ku yimaada sharciga loo dheereeyo si ey suurtagal ugu helaan iney tacliintooda dhameeystaan oo dabadeed ey qayb ka noqdaan suuqa shaqada. Middaasina oo uu dabada ka riixayay xisbiga MP.
Hoggaanka xisbiga MP ayaa mar kale doonaya inuu tallaabo dheeri ah horay u sii qaado. Si qaxootigu uga baxsadaan iney adeecaan shaqo ka hooseeysa xirfaddooda waa in dadyoowa sharciga joogtada ah la siineyo lagu daro kuwooda dhigta wax-barashooyinka sare iyo jaamicadaha iyo iney dalka ku nagaadaan abid.
Sidoo kale waa in dadyoowgaa lagu daraa kuwooda ku howl-gala shaqooyinka mushaarooyinka lagu kabo waxa loo yaqaanno - subventionerad anställning, maadaama aan iminka hoowlaha noocaasi ah lagu helin sharciga deggenaansho ee joogtada ah.
Shir-weynaha ku soo food leh xisbiga MP ayey qaar ka mid xubnaha xisbigu aamin-san yihiin in wakhtiga tacliinta lagu jiro lala mid dhigo sidii shaqada oo kale, kolka uu dhammaado sharcigii deggenaansho ee ku meel-gaarka ahaa ee dib loo eegeyo suurtagalka helista sharciga deggenaansho ee joogtada ah. Siyaasiyiinta ayaa dhalleeceeyn dusha uga tuurey xeerku sida uu maanta u qoran yahay.
"Xaqiiqdu waxay maanta tahay in haddii aad ka shaqeeyso maqaayadahan cunnooyinka degdegga ah lagu iibiyo, aad xaq u leedahay sharciga deggenaansho ee dalka, hase yeeshee aadan middaa xaq u lahayn haddii tusaale ahaan aad ku jirto barashada luuqadda iswiidhishka, waa ereyada ku qoran mid ka mid ah mooshinnada la soo hor-dhigi doono shir-weynaha"
Maria Ferm, af-hayeenka xibiga MP ee siyaasadda socdaalka, isla-markaana xubin ka ah hoggaanka xisbiga, ayaa xaqiijisay war-bixinta laanta wararka ee Ekot iyo inuu hoggaanka xisbigu ku tala-jiro sidii loo sahli lahaa xeerarka socdaalka, gaar ahaan sidii loo sahli lahaa howlaha.
Haddii kale waxaa dhici kareeysa in cid walba isku daydo sidii ey madaxa ula geli lahayd shaqada ugu soo horeeysa si ay sharci deggenaansho ku hesho. Halkii ay shahaadadeeda ka cayimin lahayd ama u dhameeys-tiri lahayd tacliinteeda oo bulshada ay ula qabsan lahayd si ka hagaag-san.
Xisbiga MP ayaa aamin-san in kolka uu dhammado muddadii loo qabtay is-bedelka lagu sameeyey xeerarka socdaalka ee ku beegan sannadka 2019, inuu dib u shaqeeyo xeerkii hore ee socdaalka, sida ku cad mooshinnada shir-weeynaha xisbiga MP la hor geeyn doono. Tallaabadaasi ayay macnaheedu tahay in dhammaan dadyoowga la siiyo sharci deggenaansho ee joogto ah, haddii shaqa la hayo iyo haddii kaleba.